GRAPHISOFT gbatịrị BIMcloud dị ka ọrụ maka nnweta zuru ụwa ọnụ - Geofumadas
GRAPHISOFT, onye ndu ụwa n’ịrụpụta ihe ngwanrọ maka iwulite ihe ọmụma (BIM) maka ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, agbasawanye nnweta BIMcloud dị ka ọrụ zuru ụwa ọnụ iji nyere ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ aka na ndị nrụpụta aka ịgbakọ na ngbanwe taa na-arụ ọrụ site na ụlọ N'oge ndị a siri ike, a na-enye ya n'efu maka ụbọchị 60 nye ndị ọrụ ARCHICAD site na ụlọ ahịa weebụ ọhụrụ ya.
BIMcloud dị ka Ọrụ bụ ihe ngwọta igwe ojii nke GRAPHISOFT nyere nke na-enye elele niile nke ọrụ otu ARCHICAD. Ọsọ ọsọ na mfe mba ụwa ịbanye na BIMcloud dị ka ọrụ pụtara na ndị otu imepụta nwere ike ịrụ ọrụ n'otu oge, n'agbanyeghị ogo ọrụ a, ọnọdụ ndị otu, ma ọ bụ ọsọ nke njikọ Internetntanetị. Enweghị ntinye ego IT mbụ, ntinye ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na scalability na-eme BIMcloud dị ka Ọrụ dị ike maka ngwa ọrụ dịpụrụ adịpụ, ọkachasị n'oge ọtụtụ ndị na-atụ ụkpụrụ ụlọ nwere ike ha agaghị enwe ike ịnweta ngwaike ụlọ ọrụ ha.
"Iji nyere ndị ọrụ anyị aka ịhazigharị ọrụ ọnụ mgbe anyị nọ n'ụlọ, anyị na-enye ụbọchị 60 ohere n'efu na BIMcloud dị ka Ọrụ nye ndị ọrụ azụmahịa niile nke ARCHICAD gburugburu ụwa," ka Huw Roberts, CEO nke GRAPHISOFT kwuru.
“Na mbu dị na ọnụọgụ ole na ole nke ahịa, anyị nwere obi ụtọ na anyị enweela ike ịgbasa ngwa ngwa site na ntanetị nke mpaghara data mpaghara gburugburu ụwa - iji hụ na arụmọrụ dị elu na igbo mkpa nke ndị ọrụ anyị n’ebe niile. Ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya ma bulie nkwalite otu jikọrọ ọnụ na-enyere ndị ọrụ anyị aka ịkwado azụmahịa na gburugburu ebe a taa. "
Dabere na Francisco Behr, Director nke Behr Browers Architects, “BIMcloud dị ka Ọrụ bụ kpọmkwem ihe ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ kwesịrị ịkwaga ịrụ ọrụ site na ụlọ na-efu efu. Ntọala IT dị ngwa ma dịkwa mfe. Anyị na-arụ ọrụ ugbu a n'ọtụtụ nnukwu ọrụ na njikọta n'etiti ndị ọrụ ibe anyị na ndị mmekọ na-enwe nnukwu mmiri na mpaghara niile ".
Previous Post«Previous Obodo nke narị afọ nke 101st: ihe owuwu ihe owuwu XNUMX
Next Post EGO na Loqate gbasaa mmekorita iji nyere ndi aka n’achụmnta ego aka inweta ngwa ahiaNext »